होन्डाले सार्वजनिक गर्‍यो ५० सिसीका यी दुई स्कुटर :: एजेन्सी :: Setopati
नयाँ दिल्ली, माघ २
यतिबेला बजारमा धेरै सिसी भएका दुई पांग्रे सवारी साधन निर्माण एवम् सार्वजनिक गर्न विभिन्न अटो निर्माण कम्‍पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। यस्‍तोमा होन्‍डाले भने कम सिसी क्षमता भएको दुई वटा स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। होन्डाले ५० सिसी क्षमता भएको जिओर्ना र डंक सार्वजनिक गरेको भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ।
होन्डाले जापानी बजारको लागि अद्यावधिक जिओर्ना र नयाँ डंक सार्वजनिक गरेको हो। यी दुवै ५० सिसी इन्जिनबाट चल्ने इन्ट्री-लेभलका स्कुटर हुन्। कम्पनीले दाबी गरेअनुसार यी स्कुटरहरूले प्रति लिटर ८० किलोमिटरसम्मको माइलेज दिन्छ।
होन्डाको अद्यावधिक जिओर्नामा रेट्रो डिजाइन पाउन सकिन्छ। यसको अगाडि भागमा गोलो आकारको हेडल्याम्प छ, जसले गर्दा स्कुटरको लुक्स विशेष र छुट्टै देखाउँछ। त्यस्तै, यसको इन्डिकेटर र रिअर-भ्यू ऐना पनि गोलो आकारकै छ। स्कुटरमा सिंगल-पिस सिट छ। जिओर्नामा एनलग इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर र १२ भोल्टको युएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि पाउन सकिन्छ।
जिओर्ना जस्तै डंकमा पनि १२ भोल्टको चार्जिङ सकेट र एनलग इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पाउन सकिन्छ। तर यसको बाहिरी आवरण र स्टाइलिङ भने जिओर्नाको तुलनामा अलि फरक छ।
डंकमा चार स्ट्रोक, एसओएचसी, सिंगल-सिलिन्डर इन्जिन जडान गरिएको छ। जसले ८,००० आरपिएममा ४.५ पिएस पावर र ६,००० आरपिएममा ४.१ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ।
डंक र जिओर्ना दुवैमा २३ लिटरको डिकी क्षमता छ। यी दुवैमा ४.५ लिटरको इन्धन क्षमता छ। कम सिसीका भएपनि यी स्कुटरहरूले यात्रु सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखेको छ। यी स्कुटरहरूले राइडरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ।
कम्पनीले होन्डा जिओर्नाको बजार मूल्य २ लाख ९ हजार जापनिज येन र डंकको मूल्य २ लाख २९ हजार जापानिज येन तोकेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २, २०७८, ०३:५५:००
जनकपुर मेयरमा अग्रता लिइरहेका मनोज भन्छन्- ५ वर्षदेखि भोट मागिरहेको थिएँ
विराटनगरको उपमेयरमा गठबन्धनका अमरेन्द्रलाई धेरै पछाडि पारेकी शिल्पा
कोरोनाका बेला गाउँ पसेका युवा इञ्जिनियरलाई गाउँलेले चुने पालिका अध्यक्ष
२०१ पालिकाको परिणाम आउँदा ४२ प्रतिशतमा कांग्रेसको जित, पछ्याउँदै एमाले
काठमाडौंका अरू वडाको मत गन्दा पछि पर्लान् बालेन शाह?
सरकारले बढायो सार्वजनिक सवारीको भाडा, कहाँको कति पुग्यो? (सूचीसहित)
बढ्यो टिभिएस स्कुटर र मोटरसाइकलको मूल्य (सूचीसहित)
४३७ किलोमिटर माइलेज दिने टाटाको 'नेक्सन इभी म्याक्स' सार्वजनिक, मूल्य कति?
होन्डाको नयाँ योजना, एक जनाले सात लाख रूपैयाँ नगद उपहार पाउने
जोन डियर ट्र्याक्टर नेपाल भित्रिएको २० वर्ष पूरा
तीन शब्द, दुई प्रेम हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित'
यो रहर पनि... सुरेन्द्र रेग्मी